IIMPENDULO | Sichuan Mingtaishun Cemented khabhayithi Co., Ltd.
Imibuzo emi-5 yokuyibuza ngaphambi kokukhetha iMill Mill
Ambalwa amanyathelo kwinkqubo yokwenza izinto ebaluleke njengokukhetha eyona ndlela isebenzayo kwezixhobo zomsebenzi wakho. Inkqubo iyenza nzima kukuba into nganye yezixhobo ineejiyometri ezizodwa, ezibaluleke kakhulu kwisiphumo sokugqibela senxalenye yakho. Sincoma ukuba uzibuze imibuzo emi-5 ephambili ngaphambi kokuba uqalise inkqubo yokhetho lwezixhobo. Ngokwenza njalo, unokuqinisekisa ukuba wenza inyameko yakho ekukhetheni esona sixhobo silungileyo kwisicelo sakho. Ukuthatha ixesha elongezelelekileyo ukuqinisekisa ukuba ukhetha esona sixhobo silungileyo kuya kunciphisa ixesha lokujikeleza, kwandise ubomi besixhobo, kwaye kuvelise imveliso ekumgangatho ophezulu.
Ngaba yeyiphi into endiyisikayo?
Ukwazi umbandela osebenza nawo kunye neepropathi zayo kuya kunceda ukunciphisa ukhetho lwakho lokugaya ukuphela. Imathiriyeli nganye ineseti yeepropathi zoomatshini eziyinika iimpawu ezizodwa xa kusenziwa machining. Umzekelo, izinto zeplastiki zifuna isicwangciso esahlukileyo sokwenza izinto-kunye nezixhobo zejiyometri ezahlukileyo- kunokuba izitovu zisenza. Ukukhetha isixhobo esineejiyometri ezilungiselelwe ezo mpawu zikhethekileyo kuya kunceda ukuphucula ukusebenza kwesixhobo kunye nokuphila ixesha elide.
Isixhobo seHarvey sigcina iintlobo ngeentlobo zeZinto eziPhezulu zokuSebenza eziPhezulu. Ukunikezelwa kwayo kubandakanya izixhobo ezilungiselelwe ii-steels ezilukhuni, ii-alloys ezingaqhelekanga, ii-alloy eziphakathi, ii-steels zomatshini wasimahla, ii-aluminium alloys, izinto ezirhabaxa kakhulu, iiplastiki kunye nezinto ezidityanisiweyo. Ukuba isixhobo osikhethileyo siza kusetyenziswa kuphela kuhlobo oluthile lwezixhobo, ukukhetha isixhobo esithile sokugqibela sesona silungele ukubheja kwakho. Ezi zixhobo zixhobo zibonelela ngeegeometri ezilungelelanisiweyo kunye nepeyinti efanelekileyo kwiimpawu zento ethile. Kodwa ukuba ujonge ukuvelisa ubhetyebhetye kuluhlu olubanzi lwezixhobo, icandelo lesixhobo sokugqibela seHarvey isixhobo esincinci yindawo elungileyo ukuqala.
Izisombululo ze-Helical zikwabonelela ngemveliso eyahlukeneyo eyenzelwe ngokukodwa izinto ezithile, kubandakanya iAluminiyam yeeAlloys kunye nezinto ezingadibaniyo; kunye neeSteels, iiAlloys eziPhezulu eziPhezulu, kunye neTitanium. Icandelo ngalinye libandakanya iindidi ezahlukeneyo zokubalwa kwembande - ukusuka kumatshini okusila oogubhu abayi-2 ukuya kwiiMulti-Flute Finishers, kunye neeprofayili ezininzi ezahlukeneyo, iindlela zokwaleka kunye neejometri.
Yeyiphi imisebenzi endiza kuyenza?
Isicelo sinokufuna enye okanye imisebenzi emininzi. Imisebenzi machining Common ziquka:
Ukusebenza kokugaya okuphezulu
Ngokuqonda imisebenzi (e) efunekayo yomsebenzi, umatshini uya kuba nokuqonda okungcono ngesixhobo esiza kufuneka. Umzekelo, ukuba umsebenzi ubandakanya ukurhabaxa ngokwesiko kunye nokubiwa, ukukhetha i-Helical Solutions Chipbreaker Rougher ukukhupha uninzi lwezixhobo kunokuba lukhetho olungcono kunoMgqibelelisi onemibhobho emininzi.
Zingaphi Iiflanzi Endizifunayo?
Enye yezona zinto zibalulekileyo xa kukhethwa ilitye lokusila kukumisela ukubala okufanelekileyo. Zombini izinto kunye nokusetyenziswa kudlala indima ebalulekileyo kwesi sigqibo.
Xa usebenza kwizixhobo ezingadibaniyo, olona khetho luqhelekileyo zizixhobo zombhobho ezi-2 okanye ezi-3. Ngokwesiko, ukhetho lweefluti ezimbini ibilukhetho olufunwayo kuba ivumela ukucocwa okuhle kwe-chip. Nangona kunjalo, ukhetho lwe-3-flute lubonakalise impumelelo ekugqityweni nasekusebenziseni izixhobo zokuSebenza eziPhezulu, kuba inani eliphezulu leeflthi liya kuba neendawo zokudibanisa kunye nezinto eziphathekayo.
Izinto ezomeleleyo zinokwenziwa ngomatshini kusetyenziswa naphina ukusuka kwi-3 ukuya kwi-14-imibhobho, kuxhomekeke ekusebenzeni okwenziwayo.
UkuLwa kweMveli: Xa kurhabaxa, isixa esikhulu semathiriyeli kufuneka sidlule kwiintlambo zezixhobo esendleleni eya kwindawo yokufuduswa. Ngenxa yoku, inani eliphantsi leefleyiti-kunye neentlambo ezinkulu-ziyacetyiswa. Izixhobo ezineembande ezi-3, 4, okanye ezi-5 zihlala zisetyenziselwa ukurhaba kwendabuko.
Ukubamba: Ifayile ye4 kukukhetha okufanelekileyo, njengoko ukubala kweefluti ezisezantsi kukhokelela kwiintlambo ezinkulu kunye nokusebenza ngobuchule kwe-chip.
UkugqibaXa ugqibezela ngento ene-ferrous, kucetyiswa ukubalwa kweefluti eziphezulu kwiziphumo ezilungileyo. Ukugqiba iiMill Mills kubandakanya naphina ukusuka kwi-5 ukuya kwi-14 imibhobho. Isixhobo esifanelekileyo sixhomekeke ekubeni ingakanani imathiriyeli esele isuswe kwindawo leyo.
Ukusebenza kokugaya okuphezulu: I-HEM sisitayile sokurhabaxa esinokusebenza kakhulu kwaye sikhokelele kulondolozo lwexesha elibalulekileyo kwiivenkile zomatshini. Xa usebenzisa isixhobo seHEM, khetha i-5 ukuya kwi-7-imibhobho.
Zeziphi izixhobo ezikhethekileyo ezifunekayo?
Emva kokuchaza into osebenza kuyo, ukusebenza (ii) okuza kwenziwa, kunye nenani leembande ezifunekayo, inyathelo elilandelayo kukuqinisekisa ukuba ukhetho lwakho lokusila lokugqibela lunemilinganiselo echanekileyo yomsebenzi. Imizekelo yokuqwalaselwa okuphambili kubandakanya ukusika ubukhulu, ubude bokusikwa, ukufikelela, kunye neprofayili.
Ububanzi be-cutter bubungakanani obuya kuchaza ububanzi beslot, obenziwe yimiphetho yokusika yesixhobo njengoko sijikeleza. Ukukhetha i-cutter diameter engalinganiyo-nokuba inkulu kakhulu okanye incinci- inokukhokelela ekubeni umsebenzi ungagqitywa ngempumelelo okanye icandelo lokugqibela lingangqinelani. Umzekelo, iidayimitha ezincinci zokusika zibonelela ngakumbi ngaphakathi kweepokotho ezixineneyo, ngelixa izixhobo ezikhulu zibonelela ngokuqina kokuqina kwimisebenzi yevolumu ephezulu.
Ubude bokusikwa nokuFikelela
Ubude bokunqunyulwa obufunekayo nakweyiphi na indawo yokusila kufuneka buchazelwe ngobude obude kunxibelelwano ngexesha lomsebenzi. Oku kufanele kube kuphela ixesha elide njengoko lifuneka, kwaye kungasekho. Ukukhetha esona sixhobo sifutshane kunokwenzeka kuya kubangela ukunciphisa okungaphezulu, ukuseta okungqongqo ngakumbi, kunye nokuncitshiswa kwengxoxo. Njengomthetho wesithupha, ukuba isicelo sifuna ukusikwa kubunzulu obungaphezulu kwe-5x yesixhobo sobubanzi, kunokuba kulungele ukuphonononga iindlela zokufikelela ezinentamo endaweni yobude obude bokunqunyulwa.
Ezona ndlela zixhaphakileyo zeprofayili yokuphela kwesikwere, irediyo yekona kunye nebhola. Iprofayile yesikwere kumatshini okusila anezandi ezineekona ezibukhali eziphindwe kabini kuma-90 °. Iprofayile yerediyo yekona ithatha indawo yekona ebuthathaka kunye neradiyo, ukongeza amandla kunye nokunceda ukuthintela ukuntywila ngelixa usandisa ubomi besixhobo. Okokugqibela, iprofayile yebhola inezinto ezirhubuluzayo ezingenasicaba sisezantsi, kwaye ijikelezwe ekugqibeleni yenza “impumlo yebhola” kwincam yesixhobo. Olu lolona hlobo lokugqibela lokusila lokugqibela. Umda wokusika ojikeleze ngokupheleleyo awunakona, ususa eyona ndawo inokungaphumeleli kwisixhobo, ngokuchasene nomphetho obukhali kwipilitha yokuphela kweprofayili. Iprofayile yokusila yokugqibela ihlala ikhethwa ziimfuno zenxalenye, ezinje ngeekona zesikwere ngaphakathi epokothweni, efuna isikwere sokugqibela. Xa kunokwenzeka, khetha isixhobo esineyona radius yekona inkulu evumeleke ngokwenxalenye yeemfuno zakho. Sincoma irediyo yekona nanini na xa isicelo sakho siyivumela. Ukuba iikona zesikwere ziyafuneka ngokupheleleyo, cinga ukurhabaxa ngesixhobo serediyo yekona kunye nokugqiba ngesixhobo sephrofayili yesikwere.
Ngaba ndifanele ndisebenzise isiXhobo esiDibeneyo?
Xa sisetyenziswa kwisicelo esifanelekileyo, isixhobo esigutyungelweyo siya kunceda ukukhulisa ukusebenza ngokubonelela ngezi zibonelelo zilandelayo:
Iiparameter zokubaleka ezingakumbi
Ubomi bexesha elide